गस्तीमा गएका सैनिकको १५ फिटको दानवसँग भिडन्त, अमेरिकाले संसारसँग लुकाउँदैछ रहस्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गस्तीमा गएका सैनिकको १५ फिटको दानवसँग भिडन्त, अमेरिकाले संसारसँग लुकाउँदैछ रहस्य
एजेन्सी। करिब १८ वर्षदेखि अमेरिका अफगानिस्तानमा अलकायदा र तालिबानविरुद्ध अपरेशन चलाइरहेको छ । यसका लागि लाखौं अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमा तैनाथ गरिएका छन् । यहाँ अपरेशनका क्रममा केही यस्ता घटना पनि भएका छन् जसलाई अमेरिकाले संसारसँग लुकाएर राखेको छ । यस्तै एक रहस्यमय घटना सन् २००२ मा भएको थियो ।
अमेरिकी सैनिकको गस्ती टिम अफगानिस्तानको कुनै दुर्गम क्षेत्रमा फसेर त्यतै हराए । उनीहरुलाई खोज्नको लागि अर्को टिम खटाइयो । दोस्रो टिम दुर्गम क्षेत्रमा एक गुफामा पुगे जहाँ उनीहरुको सामना एक भयानक दानवसँग भयो । हेर्दा मान्छेजस्तै भए पनि उसको आकार निकै विशाल थियो । यो विशाल व्यक्तिलाई निकै मुस्किलले मारियो । पछि अमेरिकी सैनिकले यो घटनालाई गुपचुप राखेर त्यत्तिकै दबाए । यस विषयमा इन्टरनेटमा धेरै लेखहरु लेखिए तर यो घटनामा कति सत्यता छ भन्ने विषयभने अझै रहस्यमय नै छ ।
२००२ मा हराएको एक सैनिक टोलीलाई खोज्न अर्को सैनिक टोली परिचालन गरिएको थियो । खोजी गर्दै यो टोली एक पहाडमा पुग्दो यहाँ यसअघि शायदै कोही पुगेको थियो । त्यहाँ उनीहरु पुग्दा त्यहाँ भएको एक गुफाअगाडि केही कंकाल छरिएका थिए । यसबाहेक आर्मीले प्रयोग गर्ने कम्युनिकेशन सेट पनि त्यहाँ भेटियो । यो देखेर सैनिक टोली सक्रिय भयो र आक्रमणको पोजिसनमा आयो । उनीहरुलाई लागेको थियो शायद कुनै जनावर हुन सक्छ । तर, उनीहरुको होस त्यतिबेला उड्यो जब भित्रबाट एउटा विशाल मान्छे निस्कियो जसको आकार झण्डै १५ फिट थियो ।
ती व्यक्तिको रातो रंगको कपाल र लाहो दाह्री भएको बताइन्छ । एक सैनिक उसलाई देख्नासात तुरुन्त बन्दुक लिएर फयर गर्न थाले । तर यसको ऊमाथि खासै असर भएको थिएन । यो देखेर पूरै टिम एक्टिभ भयो र सबै सैनिकले लगातार गोली चलाउन थाले । त्यसपछि भने यो विशाल मानव बेहोस भएर ढल्यो । यतिबेला पनि उसको शरीर हल्लिरहेको थियो । त्यसपछि सैनिकहरुले लगातार उसको टाउकोमा फायर गरे । अन्ततः विशाल मानव वा दानवको मृत्यु भयो । यस क्रममा एक सैनिकको पनि मृत्यु भएको बताइन्छ ।
सैनिकको टिमले बुझ्न सकिरहेको थिएन कि उनीहरुको सामना कोसँग भएको थियो । यो दावनजस्तो देखिने व्यक्ति को थियो भन्ने पनि उनीहरुले बुझेनन् । उनीहरुले आर्मी बेसमा सम्पर्क गरे र ठूलो हेलिकप्टर मगाए ताकि यो विशाल दानवलाई लैजान सकियोस् । त्यसपछि भने यो दानवलाई अमेरिकाले भित्रभित्रै दबायो । न अमेरिकाले यो घटनाबारे स्वीकार गरेको छ न यो घटनाको अन्य कुनै प्रत्यक्षदर्शी छ । त्यसैले यो घटना अझैसम्म पनि रहस्यमय नै छ ।